Kunyangwe paine matambudziko ebhatiri neIOS 14.6, Apple inomira kusaina iOS 14.5.1 | IPhone nhau
Kunyangwe paine nyaya dzebhatiri neIOS 14.6, Apple inomira kusaina iOS 14.5.1
Nezuro takaburitsa chinyorwa chatakakuzivisa nezvacho dambudziko riri kuramba richipararira pakati pevazhinji vashandisi vane bhatiri re iPhone mushure mekuvandudza kuIOS 14.6, yazvino iOS vhezheni iripo parizvino, kubva kuCupertino wamira kusaina iOS 14.5.1, saka kana iwe uri mumwe wevaya vakakanganiswa, hauchakwanise kupa donwgrade.
Patinomira kusaina iOS 14.5.1, iyo yega vhezheni yatinogona kuisa pane yedu kifaa nhasi, kana isu tiine matambudziko nechishandiso iIOS 14.6, vhezheni iyo zvinoita kunge isingawirirane mushe nemabatiri manejimendi, dambudziko iro sezviri pachena Apple harina kufunga nezvaro uye kuti ivo havana kuzivawo.
Kana matambudziko ne Hupenyu hwebhatiri ye iPhone yako zviri kuramba zvichishungurudza, une sarudzo mbiri: dzosera mudziyo kubva pakutanga pasina kudzorera backup kana gadza iyo beta yeIOS 14.7 iyo Apple yakaburitswa muna Chivabvu 20, beta iyo parizvino inongowanikwa kune vanogadzira.
Kana iwe uri mumwe wevashandisi arikusangana nematambudziko nehupenyu hwebhatiri, ini ndinokurudzira izvo dzosera mudziyo wako kubva pakutanga, usinga dzorere backup, nekuti iwe unodhonze zvakare matambudziko ekuita ayo mudziyo wako ungatove uri kusangana nawo.
Kana Apple isina kuziva iyi nyaya, ingangoita nekuti kwete iOS 14.6 nyaya asi asi iyo yekuisa maitiro pane chishandiso. Zvinogoneka kuti panguva yekumisikidza mamwe mafaera akagadziridzwa anokanganisa mashandiro ezvimwe zvinoshandiswa, nekudaro kudzoreredza mudziyo wedu ndiyo mhinduro chete, kunyanya izvozvi zvatisingakwanise kudzikisira.
Ramba uchifunga kuti kana uchideredza uye / kana kudzoreredza chishandiso, makwikwi ese ekushanda anobviswa pamudzi kuti mudziyo wedu uve nawo unogona kunge uchikanganisa kushandiswa kwebhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Kunyangwe paine nyaya dzebhatiri neIOS 14.6, Apple inomira kusaina iOS 14.5.1
Vashandi veApple vachadzokera kumahofisi mazuva matatu pasvondo kutanga munaGunyana
Apple TV + yave kuwanikwa yeNvidia Shield TV zvishandiso